पक्राउ परिने डरले सयौं डाक्टर गायव - Health Today Nepal
June 28th, 2016 समाचार0comments
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सहयोगमा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले नक्कली प्रमाणपत्रधारी चिकित्सक पक्राउ गरेर हिरासतमा लिन थालेपछि नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेका सयौं चिकित्सक गायव भएका छन् ।
उनीहरु मध्ये कोही छिमेकी भारत पुगेका छन् भने कोही बहाना बनाएर विदेश पुगेका छन् । यसरी पक्राउ परिने डरले गायव हुनेमा दाँतका डाक्टर बढी छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै चिकित्सकको प्रमाणपत्र छानविन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै ब्यूरोलाई कारवाही अगाडि बढाउन आग्रह गरेपछि चिकित्सक गायव हुन थालेका हुन । नेपाल डेन्टल एसोसिएसनका एक अधिकारीका अनुसार कुल दन्त चिकित्सक मध्ये ३० प्रतिसत नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा बिडिएस गरेर डेन्टल हस्पिटल र क्लिनिक चलाईरहेका छन् ।
प्रहरीको अप्रेसन देशभरि नै चलेपछि उनीहरुमध्ये अधिकांश भारत गरेका छन् । नाम चलेका डाक्टर पनि अहिले क्लिनिकमा भेट्न सकिदैन । चावहिलको डेन्टलमा भेटिएकी एक युवतीले भनिन, ‘उपचारका लागि क्लिनिकमा गयो भने आज डाक्टरसाप आउनु हुन्न भन्ने जवाफ मात्र पाइन्छ । कहाँ गए त ती डाक्टर ।’ यसरी गायव भएका डाक्टर मध्ये नाम चलेका दातका डाक्टर समेत रहेको डेन्टल एसोसिएसनका एक अधिकारीले बताए । गायव हुने डाक्टरहरुमध्ये बंगालादेश र चिनबाट एमविविएस पास गरेका बढी रहेका छन । निजी अस्पताल र क्लिनिक बाहेक कान्ति बाल अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पतालमा पनि हिजोआज विभिन्न बहाना बनाएर विदामा बसेका डाक्टरको संख्या ठूलो रहेको ती अस्पताल प्रशासन साखाका अधिकारीले जानकारी दिएका छन । तर तिनले संख्या भने भन्न नसक्ने बताए ।
गायव भएका वरिष्ठ चिकित्सकहरुको नाम भने अहिले भन्न नमिल्ने ती अधिकारीले बताए । नक्कली प्रमाणपत्र छानविन काण्ड पछि अहिले सयौ चिकित्सकका मोवाइन अफ छन । कत्तिको फोन नै लाग्दैन । कति चिकित्सक अहिले काममा गइरहेका छैनन् भन्ने यकिन आकडा भने प्राप्त हुन सकेको छैन । वीर अस्पतालका एक स्वास्थ्यकर्मिका अनुसार पहिले क्लिनिक जान भनेर मुख देखाउदैनथिए । अहिले नक्कली भनेर पक्राउ परिएला भनेर २० प्रतिसत जति चिकित्सक अस्पताल आउने गरेका छैनन । गत हप्ता प्रहरीले पक्राउ गरेका ३७ जना चिकित्सक मध्ये १२ जना सरकारी सेवाका थिए । त्यसमा वीर अस्पतालका चिकित्सक पनि परेका छन ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटाले काउन्सिलमा दर्ता भएका १७ हजार चिकित्सक कै प्रमाणपत्र छानविन हुने र यसबाट कोही उम्कन नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘यो गर्नु आवश्यक थियो । अहिले नगरेको भए यसले भोली भयंकर रुप लिन्थ्यो । ’
Previous article डा. कोइराला भन्छिन, ठूलो जोखिम मोलेर पेट स्क्यान ल्यायौ
Next article स्वास्थ्य राज्यमन्त्री ए क्लासको ठेकेदार
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री ए क्लासको ठेकेदार